Sida Loo Dhexgalo Istaraatiijiyadda Mawduucaaga & Ololayaasha Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Khamiis, Maarso 28, 2013 Monday, June 10, 2013 Jayson DeMers
Da'da Istaraatiijiyadda Mawduuca
Waa da'da "istiraatiijiyadda content"Iyo" suuqgeynta waxyaabaha. " Meel kasta oo aad u jeesato, marar badan iyo in ka badan, taasi waa wax aad maqli doonto. Run ahaantii, nuxurku wuxuu udub dhexaad u ahaa suuqgeynta internetka tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee habeynta mashiinka raadinta. Iyadoo la cusbooneysiinayo algorithm cusub ee Google, hase yeeshe, sida Panda iyo Penguin, istiraatiijiyad adag oo xaddidan ayaa xitaa noqotay mid aad muhiim u ah.
Waxyaabaha la calaamadeeyay waxay u shaqeynayaan waxyaabo yaab leh shirkado badan, mana ka hadlayno oo keliya waxyaabaha ku saabsan websaydhyada halkan ku yaal. Waxaan eegaynaa si wanaagsan loo farsameeyay, si xirfadaysan loo soo baakadeeyay, oo loola jeeday-bulsheed-warbaahinta-wanaaga oo wax looga qabto noocyada waaweyn iyo ganacsatada yar yar si isku mid ah.
Istaraatiijiyadda mawduucu waa mid nool oo laadadka bogagga internetka. Waxay diiradda saaraysaa maqaallo badan oo SEO ah, laakiin dad badan oo aan arko - dadka ku lug leh warbaahinta bulshada - ha u qorsheyn istiraatiijiyad nuxur u ah kanaalladooda bulshada. In kasta oo xaqiiqda ah in dadku inta badan u tixgeliyaan warbaahinta bulshada mid aan lahayn waxyaabo gaar ah, oo ku jira baakad (oo ka soo jeeda aaminaadda in warbaahinta bulshada ay tahay "wadaagid" waxyaabaha laga helo meelo kale), waxay u shaqeyn kartaa waxyaabo la yaab leh olole kasta / dadaal warbaahinta bulshada ah.
Istaraatiijiyadda Tusmada ee Warbaahinta Bulshada? Ma kaftameysaa?
Kaqeybgal istiraatiijiyad wanaagsan oo ku saabsan websaydhyada ayaa kugu filan; Ka dib oo dhan, waxay qaadataa ilo badan si loo abuuro tifaftirka nuxurka ee loogu talagalay blog fudud. Muxuu qofna u doonayaa inuu waqti ku qaato (oo ay u badan tahay lacag) waxyaabaha uu ka kooban yahay si uu ugu gudbo warbaahinta bulshada? Miyaanay ahayn kaliya inaan wadaagno xiriiriyeyaal iyo sawirro?
Qeyb weyn oo ka mid ah ololahaaga warbaahinta bulshada waa inay runtii ka kooban tahay wadaagista waxyaabaha xiisaha leh iyo kuwa khuseeya, soo dhejinta heerarka ama tweets ka caawiya dadka isticmaala, ka qeyb qaadashada akhristayaasha / kuwa raacsan, iwm. arrimaha. Waxaa jira qaddarin istiraatiijiyadeed oo ku lug leh; marka laga reebo istiraatiijiyad fudud, waxaa jira “istiraatiijiyad content” xitaa warbaahinta bulshada. Saddex walxood ayaa ugu muhiimsan sida ugu wanaagsan ee ololahaaga warbaahinta bulshada ay u qabtaan:
Waxyaabaha ku jira baraha bulshada looma jeedin oo keliya in la soo ururiyo calaamadaha bulshada loogu talagalay Google, inkasta oo taasi muhiim tahay. Kaliya maahan riix-marin, sidoo kale. Intooda badan, kaliya ha u adeegsan istiraatiijiyad ka kooban kaliya inaad yeelato bogga warbaahinta bulshada ee "firfircoon".
Warbaahinta bulshada waa inay kaxeeyaan hawlgelinta. Tani waxay kordhisaa ogaanshaha astaanta, caannimada, iyo kalsoonida. Waxaas oo dhan, maaha wax la yaab leh, waxay kuxirantahay istiraatiijiyaddaada ku saabsan warbaahinta bulshada.
Maxay Tahay Istaraatiijiyad Wanaagsan ee Warbaahinta Bulshada?
Qeexitaanka wanaagga ayaa si weyn u kala duwanaan kara. In kasta oo ay fududahay in la yiraahdo waxay kuxirantahay niche / suuqa aad kujirto oo aad uga tagto halkaas, waxaa jira fikrado aasaasi ah laakiin muhiim ah oo khuseeya inta badan xeeladaha warbaahinta bulshada:
Sifee oo daabac waxyaabaha ugu habboon ee "HADA": Dadku badanaa waxay soo ururiyaan xiriiro fara badan waxayna ku jadwaleeyaan maareynta maareynta warbaahinta bulshada sidaHootsuite ama Buffer. In kasta oo ay taasi caadi tahay, iska hubi in waxyaabaha aad wadaagtaa aysan ku habboonayn oo keliya laakiin sidoo kale ay yihiin kuwo hadda socda.
U samee iyaga macaan: Caajis, hal xariiq oo xariijin gaaban ayaa si sax ah u socon doonin dareenka taageerayaashaada. Bogagga sida Facebook iyo Google+, ku dar sawirro ku habboon qoraaladaada. Kuwani waxay ka dhigaan kuwo taagan oo soo jiita dareenka dadka. Mabaadi'da aasaasiga ah ee Feejignaan-Xiiso-Rabitaan ku dabaq waxa aad ku qortay baraha bulshada. Ha iloobin tan ugu dambeysay: Ficil! Had iyo jeer isticmaal wac-to-action.
Ku qor cinwaanno gaar ah, cad, fudud, laakiin magnetic iyo sharraxaad ah. Kanaal kasta oo bulsheed wuxuu leeyahay tiro dad ah ama qaab hawlgal. Barta Facebook, dadku inta badan kama qayb qaataan faallooyinka (halkii, "sida" waxay ku saabsan tahay illaa inta ay tagayaan, qoraallada badankood). Barta Twitter-ka, hawlgelinta waxay noqon kartaa wax yar oo qoto dheer, iyada oo loo marayo retweets iyo jawaabaha. Waxaan arkay bulshada Google+ oo aad uga mashquul badan meelaha kale. Laakiin waxay kuxirantahay sida aad u qaabeyso waxaad ku dhajiso mid kasta oo ka mid ah kanaaladaan bulsheed.
Fahmaan in warbaahinta bulshada aysan kaliya u dhigneyn iskuxirka: Ma ahan Digg, intaas kadib. Ma joogtid halkaas si aad u dhajiso xiriiriyeyaasha oo aad u sii gudubto. Dadaal wax ku ool ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada ayaa ku saabsan abuurista hawlgelinta. Haddii aad la xiriiri karto isticmaaleyaashaada - ku dhiirrigeli inay wadaagaan, dib u soo celiyaan, u soo jawaabaan, u faalleeyaan ama u bilaabaan dood in khariidooyinka loo adeegsado wax fayras leh - waxaad dhihi kartaa dadaalkaaga baraha bulshada ayaa miro dhal noqday.
Baraha Bulshadu waa Kordhin Adiga / Meheraddaada / Websaydhkaaga ah
Warbaahinta bulshada ma ahan - mana noqon karto - shirkad gaar ah oo ka baxsan ganacsigaaga / websaydhkaaga. Haddii aad dhiseyso degel, oo aad isku dayeyso inaad u hagaajiso taraafikada iyo is-beddelka, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dadaalkaaga warbaahinta bulshada uusan u socon qashinka.
“Dadaallada warbaahinta bulshada,” kama hadlayo kaliya abuurista muuqaal bulsheed firfircoon oo leh taageerayaal badan, kuwa raacsan, iyo waxyaabaha la midka ah. Runtii waxa aan ka hadlayo waa:
qiimayaasha riix-dhex-dhexaad ah
beddelaadda kanaallada bulshada
akhriska iyo taraafikada
fursadaha sare ee saamiyada, retweets, iyo cunsur sare
Noocyada waaweyni waxay ka faa'iideysanayaan warbaahinta bulshada ROI qarxa. Waxyaalaha sumadda leh ayaa si xawli ah u noqonaya heerka ku xiga ee xayeysiinta aan la xakamayn karin - oo maxaad qiyaasi kartaa? Waa is shaqeeya. Dhamaan gadaasheeda waa istiraatiijiyad adag oo adag oo si gaar ah loogu talagalay wadiiqooyinka warbaahinta bulshada.
Kusoo deg bandogon sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid maxaa yeelay waxay hubaa inay noqonayso mid adag (xaqiiqdii, waa horeba) si loo adkeeyo codkaaga inta lagu jiro buuqa oo dhan.
Tags: Content Suuqistiraatiijiyadda contentayna search engineSEOwarbaahinta bulshadaMedia Social Suuq
TweetSeeker: Raadi Raad-raacgaaga Dambe